aspects - Synonyms of aspects | Antonyms of aspects | Definition of aspects | Example of aspects | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for aspects
Top 30 analogous words or synonyms for aspects
Warcraft ဇာတ်ကောင်များ Deathwing the Destroyer (voiced by Michael McConnohie), အများကအသိမှတ်ပြုကြတဲ့ Neltharion the Earth-Warder, အနက်ရောင်နဂါးတွေရဲ့ ခေါ်င်းဆောင် ၊ Azeroth ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရှေးဟောင်းနတ်ဘုရားတွေက လုံခြုံအောင်သက်တော်စောင့်အဖြစ်ထားခဲ့တဲ့ နဂါး ၅ ကောင်အနက်ပါဝင်သော နဂါးဖြစ်တယ်။ He was given dominion over the earth by the titans, shapers of worlds. The Old Gods, twisted beings of pure evil that once ruled Azeroth, drove Neltharion to madness, and he turned against the other Dragon Aspects. Deathwing spurred the Second War by sabotaging the Alliance in the guise of Daval Prestor,ahuman lord, and helping the Horde enslave the red Dragon Aspect, Alexstrasza. He was defeated by the Aspects and fled to the depths of the elemental realm of Deepholm to plot revenge.
ရုရှားသဒ္ဒါ NOTE: In the discussion below, various terms are used in the meaning they have in the standard Russian discussions of historical grammar. In particular, aorist, imperfect, etc. are considered verbal tenses rather than aspects, because ancient examples of them are attested for both perfective and imperfective verbs.
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ အထွေထွေကောင်စီ (General Council-GC)။ အထွေထွေကောင်စီသည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် အမှုဆောင် ဆွေးနွေးမှုဖိုရမ် တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ GC သည် ဝန်ကြီးအဆင့်ညီလာခံကို တာဝန်ခံရပြီး၊ ညီလာခံတစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြားတွင် ဝန်ကြီးအဆင့် ညီလာခံများက ချမှတ်သောလုပ်ငန်းများကို GC ကတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ GC သည် လိုအပ်သလို တွေ့ဆုံစည်းဝေးပါသည်။ GC သည် ၎င်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်းများကိုလည်းကောင်း၊ WTO ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကောင်စီများဖြစ်သည့် Council for Trade in Goods, Council for Trade in Services နှင့် Council for Trade-Related Aspects for Intellectual Property Rights (TRIPS) တို့အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်းများကို အတည်ပြုချမှတ်ပေးပါသည်။ GC သည်-
သောက္ကတဲ During military rule, from 1950s, Sukhothai was placed in Thai national curriculum. Sukhothai became model of 'father-son' rule, described as 'Thai Democracy', free from 'foreign ideology'; Angkorian tradition compared to communism. Other Sukhothai aspects were investigated seriously, such as commoner and slave status, and economic situation. These topics, said, were on stage of ideological thoughts fighting during the Cold war and civil insurgency times in 1960-1970s.